Reality – Categories – Channel Myanmar
Any Body Can Dance (2022) Any Body Can Dance (2022)ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်မဆို ကခုန်နိုင်ပါတယ်။ အကကို နှစ်သက်နေသရွေ့ မည်သူမဆို ကခုန်နိုင်ပါတယ် ။ 'Anybody Can Dance' အစီအစဉ်ဟာဆိုရင် အကမကျွမ်းကျင်ပေမဲ့ ဝါသနာပါတဲ့သူတွေကို အကသင်တန်းပေးသွားမဲ့ reality dancing ရှိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သင်ကြားပေမဲ့သူတွေကတော့ "Street Woman Fighter" ရဲ့ ခေါင်းဆောင် (၈) ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အကသမားတွေအစား အကကို မထူးချွန်တဲ့သူတွေ ပါဝင်ခြင်းက ကြည့်ရှုသူတွေကို မတူညီတဲ့ ရသတစ်မျိုး ဖြစ်စေမှာပါ ။ ဒီအစီအစဉ်ကို သူငယ်တန်းမှ အသက် ၅၀ အရွယ်အထိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လူအများက လျှောက်လွှာတင်လျှောက်ထားခဲ့ကြပါတယ် ။ လျှောက်ထားသူတွေထဲ ဆရာဝန်များ ၊ အစိုးရအရာရှိများ ၊ သုတေသီများနဲ့ ပါမောက္ခများ အပါအဝင် သရုပ်ဆောင်များ ၊ လူရွှင်တော်များနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးနယ်ပယ်မှာ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတဲ့ Idol တွေအထိပါ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ ။NCT အဖွဲ့ရဲ့ Taeyong ...
Six Sense3(2022) Six Sense3(2022)တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ Nation’s MC ဖြစ်သူ Yoo Jae Sukအကြီးအမှုးပြုတဲ့ Six Sense Season3ဟာ March 18 ရက်နေ့မှာစတင်ထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ S1 နဲ့ S2 တုန်းကအရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တာမို့ S3 မှာရော ဘယ်လိုတွေ ဆန်းသစ်ထားမလဲ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်များကလည်း နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များဖြစ်တဲ့ Jessi, Lee Mi Joo,Lee Sang Yeob တို့ဖြစ်ပြီး Guest အနေနဲ့All Of Us Are Dead ထဲက မင်းသား Yoon Chan Young ပါဝင်မယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်များဟာ သူတို့ရဲ့ ဆဠမအာရုံကို အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကသေချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ ရိုက်ကွင်းပေါ်က အတုအယောင်များကို ခွဲခြားဆွဲထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း ၁၂ ပိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ...
EN-O’Clock’ (2021) EN-O'Clock' (2021)ENGENE လေးတွေ အတွက် သတင်းကောင်းလာပါပြီ ။ ENGENE မဟုတ်သူတွေလည်း လတ်တလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ Polaroid Love ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကိုတော့ တော်တော်များများ သိကြမယ်ထင်ပါတယ် ။ဒီသီချင်းရဲ့ သီဆိုသူတွေကတော့ I-Land ကနေ မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ကောင်လေး7ယောက် , 4th generation group တွေထဲက တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ENHYPEN အဖွဲ့ ပါပဲ ။အခု CM ကနေ ENHYPEN အဖွဲ့သားတွေရဲ့ EN-O'CLOCK ဆိုတဲ့ ရှိုးလေးကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရယ်ရတဲ့ ရှိုးလေးဖြစ်တဲ့အပြင် ကောင်လေးတွေရဲ့ Visual , Talent နဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ တခြားသော ပုံစံအမျိုးမျိုးကို မြင်တွေ့ရမှာမလို့ စိတ်အပန်းလည်းပြေ ပျော်ဖို့လည်း ကောင်းမှာပါ ။ ENGENE တွေလည်း သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း CM မှာ ...
1 Night2Days 1 Night2DaysVariety Show ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် Channel Myanmar မှ 2Day1Night ဆိုတဲ့ Show တစ်ခုကို ထပ်မံတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့က စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတွေကို2ရက်တာစီ ခရီးတိုအနေနဲ့ သွားလာရင်း အဖွဲ့ဝင် ခြောက်ယောက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဂိမ်းတွေဆော့ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့သဘာ၀ အလှတရားတွေ ၊ နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို တစ်ဝကြီး မြင်တွေ့ခံစားရမဲ့ Show တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေ အနေနဲ့ Yeon Jung-hoon , Kim Jong-min, Moon Se-yoon , DinDin, Ravi နဲ့ ပါးချိုင့်ပိုင်ရှင် အကြည်ဓာတ်လေး Kim Seon-ho တို့ပါဝင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ အလှတရားတွေအပြင် အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ ့ပျော်ရွှင်စရာ ပုံစံများကြောင့် CM ပရိတ်သတ်ကြီးကို စိတ်အပန်းပြေစေမဲ့ Showတစ်ခုဖြစ်မှာသေချာပါတယ် ။အညွှန်းကိုတော့ Nanthin Myint Zu က ရေးပေးထားပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာကတော့ CM Variety Team ...
Queendom (2019) Season1 + Season2 “Comebacks စစ်ပွဲ Queendom”Mnet ရဲ့ အကြီးမားဆုံး show တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး “Queendom” ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘုရင်မတွေချည်း အုပ်စိုးမယ့် reality survival show တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ့် အဖွဲ့တွေကတော့ ..👑 Hit ဖြစ်တဲ့သီချင်းများစွာနဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့အပြင် အဖွဲ့ disband ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတောင် အောင်မြင်မှုအရှိန်ကျမသွားတဲ့ 2NE1 ရဲ့ main vocalist “Park Bom”👑 အဖွဲ့လိုက်အောင်မြင်မှုတွေဆွတ်ခူးနေနိုင်ရုံသာမက အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ Solo Album ကိုယ်စီနဲ့ပါ အောင်မြင်မှုတွေ သိမ်းယူနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဘုရင်မလေးပါးပါဝင်တဲ့ “MAMAMOO”👑 Skirt တိုတိုလေးတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ကျော့ရှင်းလှပတဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုတာနဲ့ သူတို့ကိုပြေးမြင်ရမယ့် Miniskirt ရဲ့မူပိုင်ရှင် “AOA”👑 တခြားနာမည်ကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့မတူဘဲ ချစ်စဖွယ် theme တစ်မျိုးနဲ့ကွဲထွက်နေပြီး Ah-Choo သီချင်းနဲ့ ပရိသတ်ရင်ထဲကိုပိုရောက်လာခဲ့တဲ့ “Lovelyz”👑 Girly ဆန်ဆန် ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးလား ...
Queendom (2019) Season1 + Season2
Be Mbitious (2022) Be MbitiousMNet ရဲ့နာမည်ကြီး Street Woman Fighter အစီအစဉ်ကို မှတ်မိကြတယ်မလား?မမတွေရဲ့အပြိုင်ကြဲခဲ့ကြတဲ့ Dance တွေကို အဟောင်းသားကြည့်ခဲ့ကြရတယ်လေအခု ဒီ Be Mbitious show ကတော့ Street Man Fighter ကို မဝင်ခင်လုပ်တဲ့အယောက်၄၀ Pre audition show မျိုးပဲဖြစ်ပြီး ဒီမှာsurviveဖြစ်တဲ့သူတွေက SMF အနေနဲ့ ပါဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Applicant အယောက်၄၀ ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဒီshowမှာထူးခြားတာကတော့ dancer နယ်ပယ်တွေတင်မကဘဲတစ်ချိန်က idolဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေရော လက်ရှိidolလုပ်နေတဲ့သူတွေထဲကအကကိုတကယ်နှစ်သက်တဲ့သူတွေ ပါဝင်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီshowက အယောက်လေးဆယ်ထဲက idol applicant တွေကတော့ PENTAGON - Kino KARD - BM HOTSHOT - Roh Tae Hyun ONF - U INFINITE - Hoya တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင် SM ရဲ့ choreographer - Kasper နဲ့Single inferno ...
The Game Caterers The Game Carterers Season 1 (2021)The Game Caterers ဟာဆိုရင် တောင်ကိုရီးယားက ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်သူနှင့် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့aYoung-seok ရဲ့ Game ကစားတဲ့ show အစီအစဥ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Na Young-seok ရဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ Variety reality ရှိုးတွေထဲမှာ ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ ရင်းနှီးနေပြီးသားဖြစ်တဲ့- 1 Night2Days, - New Journey to the West - Grandpas Over Flowers - Three MealsaDay - Youn's Kitchen နဲ့ Youn's Stay အစရှိတဲ့ အစီအစဥ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် သူရိုက်ကူးတဲ့ အစီအစဥ်တွေဟာ ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာ ပြောစရာမလိုလောက်အောင်ပါပဲ ။ အခု ဒီ show မှာဆိုရင်လည်း တရားဝင် ပွဲတွေ ...
iKON on air (2022) iKON on air (2022)iKONICs တွေ အချိန်အကြာကြီး စောင့်စားခဲ့ရတဲ့ “iKON On Air” Show လေးကတော့ ထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ အဖွဲ့ဝင် ၆ ယောက်ပါဝင်တဲ့ iKON ကတော့ ဒီပရိုဂရမ်လေးမှာ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်အောင်တစ်မျိုး ချစ်စရာကောင်းအောင်တစ်ဖုံနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တင်ဆက်ရင်း သူတို့ရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုစွမ်းရည်တွေကို ပြသသွားမှာပါ။အစပိုင်းမှာလည်း Red Carpet လျှောက်ဦးမှာဆိုတော့ ကလေးတွေရဲ့ မောရှီဆောနေမှုကို တွေ့ရမှာပါနော်။ဒီအပိုင်းလေးမှာတော့ iKON တွေက ကိုယ့်ကိုယ် ရသစုံရှိုးတွေမှာ တင်ဆက်မှုစွမ်းရည် အားနည်းတယ်လို့ တွေးတာကြောင့် စွမ်းရည်မြင့်တက်ဖို့အတွက် ကြိုးစားသွားကြမှာပါ။ရသစုံရှိုးတွေမှာ အဓိကလိုအပ်တဲ့ စွမ်းရည်တွေဖြစ်တဲ့ တည်ငြိမ်မှု၊ စွမ်းအင်၊ လျင်မြန်ဖျက်လတ်မှု၊ အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်မှု စွမ်းရည်တွေကို စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အားသာချက်တွေကို ဖော်ထုတ်ပြသွားမှာပါနော်။အဲဒါအပြင် ပရိသတ်တွေ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသေးတဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုံစံအသစ်အဆန်းတွေကိုလည်း ပြသသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ ပရိုဂရမ်လေးမှာ ဘယ်လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆော့ကစားသွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရင်း iKONICs လေးတို့ ပြုံးပျော်လိုက်ကြရအောင်နော်။အညွှန်းကိုတော့ Myo Myo က ရေးသားပေးပြီးဘာသာပြန်ထားတာကတော့ CM Variety Pro ...
TMDb: 8/10 173 votes
Fantastic Family : DNA Singer (2022) Fantastic Family : DNA Singer (2022)ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကျ မဟုတ်တဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုပုံစံအသစ်တမျိုးနဲ့ ပရိသတ်ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ DNA Singerနာမည်ကြီး Celebrities တွေရဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေ ၊ အဆိုတော်အသစ်တွေကို ရွေးချယ်မယ့် Survival Show တွေနဲ့ မတူညီတဲ့ DNA Singer ကတော့ နာမည်ကြီးစတားတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုပါ ။ဒိုင်တွေအနေနဲ့လည်း Kang Daniel က စလို့ တခြား နာမည်ကြီးတွေပါဝင်ထားပြီး တကယ့်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ နာမည်ကြီးစတားတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒိုင်တွေအနေနဲ့ကတော့ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို အကဲဖြတ်ရင်း ဘယ်နာမည်ကြီးစတားရဲ့ မိသားစုဝင်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပါ ခန့်မှန်းရမှာပါ ။တစ်ဦးးချင်းယှဉ်ပြိုင်မှုပြီးဆုံးသွားရင်တော့ အနိုင်ရရှိသူတွေက ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်နဲ့အတူ စုံတွဲသီဆိုမှုကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ ။ ဒိုင်တွေဆီက အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ နောက်တစ်ခေါက်ပွဲစဉ်ရဲ့ အနိုင်ရရှိသူနဲ့ တစ်ဖန်ပြန်လည်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ပွဲစဉ်2ပွဲဆက်တိုက် အနိုင်ရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ နာမည်ကြီး Brand အနှိပ်ခံစက်ကို လက်ဆောင်အဖြစ်ရရှိမှာပါ ။ ပြောင်မြောက်တဲ့သီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုတွေအပြင် မိသားစုဝင်တွေကြားထဲက ...
Fantastic Family : DNA Singer (2022)